‘उपभोक्ताले विद्युत् खपत बढाउन् भनेर ग्याँसको मूल्यवृद्धि गर्न दबाब छ’ (भिडियोसहित) – Nepal Press
‘उपभोक्ताले विद्युत् खपत बढाउन् भनेर ग्याँसको मूल्यवृद्धि गर्न दबाब छ’ (भिडियोसहित)
‘चितवनसम्म डिजल र पेट्रोल पाइपलाइनबाट ल्याउन काम भइरहेको छ’
२०७७ फागुन ७ गते १२:४४
नेपाल आयल निगमले एकै हप्तामा दुई पटक मूल्यवृद्धि गरेको भनेर विरोध शुरू भएको छ । किन निगमले दुई पटक मूल्य वृद्धि गरेको हो ? अब आउने दिनमा के पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्छ ? नेपाल आयल निगम अहिले के गरिरहेछ ? काठमाडौंमा पाइपलाइन कहिले आउँछ ? अबका दिनमा निगमको योजना के छ ? पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण केन्द्र निर्माणको काम के भइरहेको छ ? निगमले बनाउने डिजिटल पम्प अन्य पम्प भन्दा के फरक छ ? अब कति मूल्य बढाइयो भने निगम फाइदामा जान्छ ? यी प्रश्नहरुको जवाफ खोज्न नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलसँग नेपाल प्रेसका राजाराम न्यौपानेले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ, नेपाल टकमा ।
प्रकाशित: २०७७ फागुन ७ गते १२:४४